12 Isi aghụghọ aghụghọ iji zere ụwa niile | Save A Train
Home > Travel Atụmatụ > 12 Isi aghụghọ aghụghọ iji zere ụwa niile
(Emelitere ikpeazụ On: 03/09/2021)
Iswa mara ezigbo mma, ma ndị njem oge mbụ nwere ike ịdaba na ọnyà ndị na-eme njem nlegharị anya wee bụrụ ndị isi ihe ojoo na-eme. Ndị a bụ ndị 12 isi wayo iji zere ụwa niile; site na Europe ruo China, na ebe ọ bụla ọzọ.
1. Atụmatụ aghụghọ iji zere ụwa niile: Taxgwọ igwọ igwọ igwọ itụ - etozọ
Okporo ụzọ dị ukwuu, tagzi na-agwa gị akụkọ ifo, na echiche ohuru site na windo na-eme ka odi nfe ịdaba na ojoro tagzi.
Taxigagharị na tagzi yiri ka njem njem kachasị mma dị ka ndị njem nleta, ma ọ nwere ike gbanwee bụrụ otu n'ime isi aghụghọ kachasị njem n'ụwa niile. Dịka onye njem nleta ị gaghị amata ụzọ kachasị ọsọ na nke kachasị mma site na ọdụ ụgbọ elu gaa na họtel, ma ọ bụ site n'otu mma ọzọ, yabụ ndị na-anya tagzi nwere ike ime emume n'aha gị ma jụọ gị ọnụego na-enweghị isi ma ọ bụ buru gị n'ụzọ buru ibu, maka njem na-ekwesịghị ịkarị karịa 15 m.
Etu aga - esi zere igba nzi?
Nyocha tupu oge eruo maka ọnụego tagzi anabatara na gị njem ebe. Ọzọkwa, gbaa mbọ hụ na ị nwere ngwa map dị ukwuu, nke ahụ anaghị achọ Wi-Fi, ya mere ị nwere ike ịlele ụzọ mgbe niile, na ọtụtụ ihe, họrọ ụlọ ọrụ tagzi a pụrụ ịtụkwasị obi, ma ọ bụ jiri ụgbọ okporo ígwè mee njem.
2. Ikwafu na uwe gị - Nduru Agịga
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Argentina, ọmụmaatụ, ị kwesịrị ị maara nke nduru ikwafu na uwe gị aghụghọ ojoro. Typedị wayo a na-ewu ewu na Buenos Aires, mgbe otu obodo nwere enyi bịara gị nso, na-achọ inye aka ebe ọ bụ na uwefu na-adakwasị uwe gị niile.
Were ya na ị na-enwe mmasị na etiti obodo ma ọ bụ na-enwe nnukwu ụbọchị na ogige ahụ, na-elegharị anya, na mberede onye bịara abịa nke enyi gị bịakwutere gị, na-eme ka ị mara na a na-awụfu uwe gị niile. Put tinye akpa ahụ na ala, legide anya na-eju anya maka ikwafu, ma ka ọ dị ugbu a paspọtụ, obere akpa, ihe nile nke dị oké ọnụ ahịa gị adịkwaghị.
Etu aga - esi zere ikwafu ahụ na uwe aghụghọ ndị njem?
Chọpụta dị ka mpaghara, mara ihe gbara gi gburugburu, ma gbalịa idebe anya gị n’ihu.
3. Atụmatụ aghụghọ iji zere ụwa niile: Ntugharị ndị njem ATM
Ego na-eme ka ụwa na-aga, ya mere, o doro anya na otu n’ime isi aghụghọ kachasị njem n’ụwa gụnyere ego. Otu n'ime aghụghọ kachasị njem na mba ụwa bụ igwe ndọrọ ego ATM mgbe onye na-agụ kaadị kredit na-ewepụ ihe nzere gị wee jiri ha mee ka ihe niile dezie gị..
Otu esi egbochi igwe ojoo ATM?
Ọ bụrụ na ọ dị oke mkpa, sere ego n’otu ụlọ akụ ATM buru ibu ma ama. na nnukwu ụlọ akụ dị na Europe, enwere nchebe, ya mere ohere nke ịnweta ndị na-agụ kaadị ATM dị nso na efu.
4. Bump Na Jidere
Otu n'ime kpochapụwo njem aghụghọ na ụwa, bump na jidere na-ewu ewu na njem ọha na eze, na akara ngosi. Na-eme n'ụgbọ okporo ígwè, Metro, ma ọ bụ na -eche na square Prague maka elekere ama ama mgbe mmadụ na mberede batara gị.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ ihe ọghọm, o yikarịrị ka ọ ga-abụ atụmatụ zoro ezo na-ezute. O nwere ike ịbụ nkewa nke abụọ, a “ndo”, na obere akpa gị, nche, ma ọ bụ ọla adịkwaghị. Ọkpụkpụ na njigide aghụghọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ịmara mgbe ejegharị ejegharị na Europe.
Olee otú Iji Zere The mgbapụta na jidere?
Hapụ ihe onwunwe dị oké ọnụ ahịa na ime ụlọ nkwari akụ ahụ, ma gbasaa ihe niile ị na-ewere: obere akpa na akpa jaketị dị ka ọmụmaatụ.
5. Atụmatụ aghụghọ iji zere ụwa niile: Ìgwè
Yiri na okuku na jidere, ihe ndi mmadu na-eme, bụ oge ị na-ejupụta na mberede nke otu ndị bịara abịa, ọ dị mma ile anya na ndị bịara abịa. N'ezie, ndị a amabughị mara ibe ha nke ọma, na mara mma zubere a iju ezute, ma obu igwe. Wayzọ a ọ na-ese dị ọcha kpamkpam, ebe a gbara gi okirikiri.
Nke a na-emekarị n’ebe ndị mmadụ juru, ebe otu a gwakọtara ọnụ na igwe mmadụ na ọgba aghara. Ha na-amalite ịgagharị na ị na-adọpụ uche gị ebe ndị ọzọ jidere ihe niile. Idebe ego gị n'otu ebe bụ otu n'ime 10 emehie njem ị kwesịrị izere na Europe.
Tozọ Isi Zere wargha Swarm ahụ?
Zere ebe ìgwè mmadụ ahụ nọ, zipu uwe gi, ma ọ bụ lekwasị anya n'ihe gị, ọkacha mma, debe akpa ọ bụla n'ihu gị.
6. Enyi na Enyi na Enyi
Onye ọmarịcha enyi na enyi enyi bụ aghụghọ aghụghọ njem n'ụwa niile. Ma ị na-eje ije na Red Square ma ọ bụ Paris, a ga-enwerịrị ndị obodo nwere enyi na-enyere ha aka iru Eiffel Tower ma ọ bụ gosi gị oge dị mma gburugburu obodo.
Ọzọkwa, ha ga - enyere aka n’egosi klọb niile dị egwu, na ị ga-aghọ aghụghọ ahụ n'echi ya, edemede, na ichota ego gi agwula. N'ihi ya, njem njem naanị dịka ọmụmaatụ, gafee ụwa nwere ike ịbụ ohere pụrụ iche izute ndị obodo, mana o nwekwara ike gbanwee n’ime nro kacha njọ gị.
Olee otú Iji Zere Enyi na Enyi Obodo ojoro?
Izute ndị obodo na njem gị dị mma, na otu nke kasị mma ahụmahụ. Otú ọ dị, kpachara anya onye ị tụkwasịrị obi, ma soro gị nọrọ abalị. Njem njem na mba ọzọ nwere ike ịghọ ọdachi ngwa ngwa, ya mere kpachara anya.
7. Atụmatụ aghụghọ iji zere ụwa niile: Atụmatụ mgbaaka mgbaaka
Free ihe ncheta sitere na mba ọzọ ụda dị ịtụnanya, mana onweghị ezigbo ihe n’efu n’ụwa anyị bi n’ime ya. Ya mere, adala maka azịza mgbaaka mgbaaka na-akwụkarị ụgwọ nke nwanyị obodo na-abịakwute gị na-amụmụ ọnụ ọchị, itinye mgbaaka na nkwojiaka.
Smiley na enyi na enyi, ha ga-enye gị ezigbo ọla aka ma ọ bụ ihe olu iji laa, mgbe oge niile aka nke ha na erute obere akpa gi, na ọla. Inye ihe mara mma na n'efu bụ nnukwu ndọpụ uche ma na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ndị njem nleta na-emeghị ihe ọjọọ.
Otu esi egbochi mgbaaka mgbaaka?
Adabala maka ncheta n'efu, na dị nnọọ ka anya gị oghe, ma jiri obiọma jụ ịnara onyinye ọ bụla sitere n'aka ndị bịara abịa.
8. Nwa Arịrịọ
Ejiri uwe ajị agba, unyi, na-arịọ maka ego ma ọ bụ nri, nwa na-arịọ arịrịọ bụ otu n’ime aghụghọ aghụghọ nke ụwa. Site na Europe ruo China, umuaka di n’akuku uzo, na-abụ abụ maka dollar na etiti anọ, ma ọ bụ ịpị na windo tagzi.
Ọtụtụ mgbe ụmụaka ndị a efunahụghị ka ha si ele anya, mana ezigara ha ka ha rụọ ọrụ. O doro anya, enwere ụmụaka ndị chọrọ nri na enyemaka n’ezie.
Etu aga - esi zere wayo nwata ahụ?
Nke a dị aghụghọ n'ihi na ụwa juputara na ụmụaka dara ogbenye ndị na-enweghị ihe ọzọ ha nwere karịa ịrịọ arịrịọ. Otú ọ dị, ị nwere ike ịzụrụ ịzụtara ha nri ma ọ bụ nyere aka n'ụzọ ọzọ, karịa site n'inye ego. Ụzọ a, ị nwere ike ịlele mmeghachi omume ha, ma ọ bụrụ na ha nwere mkpa n'ezie ma ọ bụ naanị obere akpa ndị njem nleta.
9. Atụmatụ aghụghọ iji zere ụwa niile: A Na-adọrọ Mmasị
Checked nyochare oge mmeghe tupu oge eruo, mana ọ tụrụ gị n’anya mgbe ị rutere n’ụlọ nsọ ma ọ bụ zụọ ahịa otu obodo agwa gị na ya emechiela. mgbe, mgbe ha hụrụ mmechuihu gị, ha na-enye gị ịkpọrọ gị gaa na nnukwu akara ma ọ bụ ụlọ ahịa ọzọ, ọbụna karịa nke mechiri emechi.
Ndị bi n'ógbè ahụ nwere ike ịnye njem dị ịtụnanya, ma ha na-adọwa gị, site na-arịọ maka ihe overpriced ọnụ ụzọ ego, ma ọ bụ were gị ịzụ ahịa ebe ha nwetara ọrụ abụba.
Otu aga-esi zere wayo a?
Ileta ebe a na-egbu-egbu dị ebube, dị nnọọ ijide n'aka na-elele gburugburu na ọ bụrụ na e nwere ndị ọzọ. Na mgbakwunye, nnyocha maka ihe kacha mma na-adọrọ mmasị ịga leta na Europe. Ọ bụrụ na mma bụ free, mgbe ahụ ọ dịghị ihe mere iji dochie ya na ihe overpriced otu, ma otu ihe ahụ maka ụlọ ahịa nwere nnukwu nyocha.
10. Ka M Were Foto Gi
Naanị njem njem nwere ike ịba mma, na mgbe ụfọdụ jupụtara ụta ọ dịghị onye na gị na-eme ka zuru okè na-elekọta mmadụ media foto. Nnukwu Ben ma ọ bụ Firenze na ndabere, you look around and then they come up to you offering to take an amazing picture, site na oke nkuku.
2 sekọnd ole na ole gachara, igwefoto gị na ihe osise ọ bụla lara, n'ihi na ọmarịcha onye ọbịa ahụ so ha gbaa ọsọ. Nke a nwere ike ime ebe ọ bụla n'ụwa, nye onye obula, n'ihi na olee nsogbu ndị a ga-eme? ma ọ na-eme.
Chọọ ndị ọzọ na-eme njem nleta, ikekwe ndị njem naanị ha, ma ọ bụ di na nwunye. Nke a bụ ụzọ kachasị dịrị nchebe iji nweta foto zuru oke ma debe igwefoto, na mgbanwe, kwuo ka ị see foto ha.
11. Atụmatụ aghụghọ iji zere ụwa niile: Ndị Switcheroo
Ụzọ kacha mma isi ejikwa ego mgbe ị na -eme njem bụ gị na gị inwe obere akwụkwọ ego oge niile. Ma ọ bụghị ya, kpachara anya na nnukwu ego, mgbe ị na-akwụ ndị na-anya tagzi ma ọ bụ n'ụlọ nri ndị dị n'ógbè ahụ. Inwere ike inye nnukwu ego maka obere ugwo, mana ndị nnata ga-eme ka hà kwụsịrị nnukwu ụgwọ ma gbanwee ya maka obere ụgwọ. Ụzọ a, ha na-agbanwe ndị njem nleta.
Ndị na-akwụ ụgwọ, ndị ọkwọ ụgbọ ala, ma ọ bụ ndị na-eche ya, nwere ike ịbụ ndị egwuregwu na aghụghọ a switcheroo. Will ga-abụ nnukwu onye emeriri ebe a, ọ bụrụ na akpacharaghị anya.
Otu esi zere aghụghọ Switcheroo?
Kwuo ego ole ụgwọ a na-ewe, mara amara mgbanwe ị kwesịrị ịnata.
12. Isi aghụghọ aghụghọ iji zere ụwa niile: Mụ akwụkwọ Bekee na-anụ ọkụ n'obi
Ha na-asụ bekee dara ada mana ha na-arịọ gị ka ị kuziere ha. Studentsmụ akwụkwọ Bekee ndị ahụ na-anụ ọkụ n'obi na-ezo na kọfị na ụlọ mmanya, ga-amalite iso gị nwee mkparịta ụka enyi na enyi, wee juo gi maka nkuzi nke bekee nke di na ime ulo gi.
N'otu oge na nkwari akụ, Onye na-anụ ọkụ n'obi nke Bekee nwere ike ịghọ ihe mkpuchi abalị, ị na-etetakwa obere akpa ezuru ohi na paspọtụ. Eziokwu bu na odighi ekwe omume imeziwanye asusu abali, ọbụnakwa na mmadụ chọrọ ịmụ asụsụ bekee ha, nkuzi a ekwesighi ime na ime ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ karịa mmanya.
Na ngwụcha, smart ijegharị bụ ụzọ kasị mma isi mee ụbọchị ndị a, n’ebe nile n’uwa. Ihe kpatara ya bụ na aghụghọ nke njem na-esi ike ma sie ike ikpughe. Nke a na-ekwu, ọ dịbeghị mfe ịga gburugburu ụwa karịa taa.
ebe a na Save A Train, anyị ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi ebe ntụrụndụ gị ka ị gaa wee mechaa njem gị nke ọma site na ịzere aghụghọ.
You chọrọ Embed anyị blog post “12 Isi Njegharị Nledo Iji Zere Worldwide” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Ftravel-scams-avoid-worldwide%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)